अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको २ खर्बको योगदान ! « Image Khabar
अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको २ खर्बको योगदान !
Imagekhabar २० पुष २०७७, सोमबार १६:३१
काठमाडौं । नविकरणीय उर्जाको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघको रजत वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले नविकणीय उर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले नविकरणीय उर्जाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई उपयुक्त नीति निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले योजना आयोगले २ लाख स्थानीय र ५ सय ठूला व्यवसायिक स्तरका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको योगदान करिब २ खर्ब बराबरको रहेको उल्लेख गर्दै सदस्य ओलीले निजी क्षेत्रबाट नविकरणीय उर्जा विकासमा अहिले सम्म अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै योगदान भएको बताउनुभयो ।
हालसम्म नेपालका करिब ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा घरेलु बायोग्यास प्लाण्टहरू जडान भइसकेको तथ्याङ्क संघसँग रहेको छ । जसबाट घरमा बायोग्यास चुलो बल्ने मात्र नभई कार्वन व्यापारबाट झण्डै १ खर्ब बढी राजश्व आर्जन गर्न सफल भएको पनि संघले बताएको छ ।